Apartment Casa Vecia - I-Airbnb
Apartment Casa Vecia
Indlu encinane entliziyweni IDolomites! Nje 5min ukusuka kwindawo ahlala Falcade / San Pellegrino ne-15 ukusuka Alleghe! Yontoni abo bamthandayo iintaba, bobabini ebusika yaye ehlotyeni. Ukwenyuka okanye nje umoya? Le yindawo yakho.I-appartament encinci kwiintaba zeDolomiti, ukuba uthanda iintaba, ukutyibilika, ukuhamba unyuka iintaba, ukukhwela, ukukhwela ibhayisekile okanye Phumla nje kwaye uthathe umoya olungileyo oku kukulungele!
Indlu encinci, enefenitshala ene-panoramic terrace yokuphumla kunye nokutshisa ilanga.
A igumbi umandlalo owodwa kwaye ibhedi ubungakanani ukumkanikazi, lokuhlambela kunye uhlamba, ikhitshi kunye kwesitulo kunye kwisitulo, umatshini wokuhlamba kunye TV zibandakanya! Pizzeria isuphamakethi ikhemesti unosilarha bar Kufutshane ... Papa Luciani imyuziyam, le utshwala endala ngobisi of Italy ukutyelela ukongeza kwiiDolomites ezintle!
Umoya ococekileyo, uxolo, ukuzola kunye nemibono emangalisayo!
Sono una ragazza di 30 anni, ho viaggiato tanto in passato, ora ho un compagno e una piccolina, quindi cerco di aiutare gli altri a viaggiare in maniera economica!Parlo inglese, e amo la montagna ,dove vivo, passeggiate, sci, arrampicata, mountain bike!viaggiare ti rende ricco!
Sono una ragazza di 30 anni, ho viaggiato tanto in passato, ora ho un compagno e una piccolina, quindi cerco di aiutare gli altri a viaggiare in maniera economica!Parlo inglese, e…
Ndiyakuthanda ukuhlalisana neendwendwe, ndiyazi kakuhle iDolomites kwaye ndikulungele ukunika iingcebiso nangakuphi na ukuhamba okanye ukukhwela, okanye nantoni na eyenye!;)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Canale d'Agordo